Hitombo avo roa heny ve ny hafainganam-pandehan'ny famandrihana rehefa mameno ny tariby sy tsy misy tariby miaraka?
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-06
Tsia, rehefa misy tariby sy tsy misy fiampangana amin'ny fotoana iray ihany, ny telefaonina dia tsy mahafantatra afa-tsy ny telefaonina charger hamelona. Noho izany, ny hafainganam-pandehan'ny fiampangana dia tsy ho avo roa heny rehefa mamaly ny tariby sy ny Wireless amin'ny fotoana iray ihany. Wil...
Nahoana ny iPhone tsy misy fiampangana an-tariby no miato na tsy afaka mandoa?
Mpanjifa maro no nanontany anay momba ny fiatoana na ny tsy fahombiazan'ny fiampangana ny iPhone mandritra ny famandrihana tsy misy tariby. Izany ve no olana amin'ny iPhone na ny charger? Afaka mamaha ny olan'ny fiampangana tsy misy tariby iPhone ve isika? ...
Ny mpanentana Wireless tsara indrindra amin'ny 2021
Raha feno tariby ho an'ny iPhone, AirPods, ary Apple Watch ny efitranonao, dia izao no fotoana hanamafisana azy amin'ny pad fanerena tsy misy tariby. Ireo no famandrihana finday sy fitaovana maro ankafizinay mba hifanaraka amin'ny tetibola rehetra. Raha mpankafy Apple ianao dia azo inoana fa manana drawer fille...
LANTAISI 3-in-1 famandrihana magnetika SW12 famerenana: mpiara-miasa amin'ny mpampiasa Apple
https://www.lantaisi.com/uploads/3c6fb84a688b709f98596e8c6ce2e977.mp4 Vao haingana no navoakanay ny charger 3-in-1 vaovao tsy misy tariby magnetika SW12, LANTAISI dia tohanan'ny mpihaino azy. Mamolavola sy mamolavola vokatra vaovao hatrany izahay mba hihaona amin'ny fivoaran'ny tsena ho an'ny ankamaroan'ny mpiara-miasa sy ny mpiasa ...
Namidy ny charger an-tariby lavitra lavitra novolavolain'i LANTAISI
Ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny endriny ankehitriny dia mora kokoa noho ny fampidirana fotsiny ny fitaovanao isaky ny mila herinaratra izy ireo. Tsy mila mitabataba amin'ny tariby mety ho tapaka sy ny seranana izay mety ho tratry ny pocket lint ianao, fa satria mila mitohy ny fitaovana ...
Wireless ny ho avy
——Resadresaka nifanaovana tamin'ny Filohan'ny Consortium Wireless Power Consortium 1. A：Nandresy ny ady ho an'ny fenitry ny fiampangana tsy misy tariby, Qi. Inona araka ny eritreritrao no antony lehibe handresena? Menno：Nandresy ny Qi noho ny antony roa. 1） Noforonin'ny orinasa manana traikefa amin'ny fitondrana c...
1234 Manaraka > >> Pejy 1/4